Isitolo samakhekhe asendulo eMessina
Amaswidi nekhofi - Ukudla - Phuza
Ikhwalithi nesiko kusukela ngo-1935
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-3)
Ikhekhe Lasendulo kusukela ngo-1935 kuya ku Messina kubhekwa njengenye yezindawo ezinhle kakhulu edolobheni.
Itholakala enkabeni yezinzwa yedolobha i-Antica Pasticceria eMessina yigumbi elihle laseCaffè lapho ungathokozela khona ama-aperitifs amahle kakhulu noma uzijabulise nge-Happy Hours elungiselelwe ngabasebenzi abaqeqeshiwe kakhulu.
Isitolo samakhekhe asendulo eMessina yaziwa nangokuthi indawo yokuhlangana yamambulense webhizinisi noma ngamakhefu akusihlwa ukuze ukwazi ukuthokozela izifundo zokuqala ezinhle - amasaladi - ama-appetizer alungiswa nsuku zonke ngumpheki egameni lesiko likaMessina.
Uma ufuna ikhambi elilungile lokugubha iDeski yakho yasendulo khekhe eMessina nakanjani iyisisombululo esihle kakhulu !!
Hhayi kuphela ngekhwalithi yensizakalo enikezwayo kepha nendawo yayo ekhethekile eyibeka ngqo enhliziyweni yedolobha ukulahlwa kwetshe kusuka eNyuvesi.
Isitolo samakhekhe asendulo eMessina idume ngokukhethekile okujwayelekile kwesiko le-khekhe le-Messina neSisilia ngokuvamile njenge: URicotta Cannoli - Cassata waseSicilian - Mnyama namhlophe - uPignolata - Amabhasikidi ezithelo neminye imikhiqizo eminingi esezingeni eliphezulu elungiswa nsuku zonke ngabapheki be-khekhe manje futhi etholakala esitolo se-Intanethi ngokuthenga okude.
Siyaziqhenya ngokuthandwa kwamakhasimende ethu anomusa futhi singasho ukuthi labo abafuna Ikhwalithi - Ngomusa - Ubuchwepheshe - Isiko bangakhetha i-Antica Pasticceria eMessina.